Ufunda njani ukumisela izaziso zakho kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ufunda njani ukuqwalasela izaziso zakho kwiYouTube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 332
Iqonga le-YouTube okwangoku lithathwa njengelona lidumileyo kwihlabathi. Kwinqaku lethu namhlanje siza kukufundisa indlela yokwenza ukumisela njani zonke izaziso zakho ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni. Uya kuba nakho ukufumana isaziso ngalo lonke ixesha ijelo olilandelayo lilayisha umxholo kwiqonga.
Izaziso zibalulekile ngaphakathi kweqonga. Basinceda ukuba sihlale sinolwazi ngomxholo olayishwe ziakhawunti esibhalise kuwo kwaye basivumela ukuba sifumane izindululo ngeevidiyo ezintsha ezivela kuYouTube. Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nesihloko, hlala nathi.
Amanyathelo okufikelela kwicandelo lezaziso
Enye yezinto ezintle esinokuthi siziqaqambise malunga nokusetyenziswa kweselfowuni ye-YouTube yindlela yayo enomdla kwaye elula. Abasebenzisi abayi kuba nengxaki enkulu ekufundeni ukusebenzisa eli qonga kuhlobo lwayo lweselfowuni.
Ukusuka kwisicelo seYouTube ungafikelela kwimisebenzi efanayo enokuqwalaselwa njengesiqhelo, kubandakanya icandelo lezaziso. Apha unokukhetha ukwenza kwaye ucime ezinye iibhokisi ngokokukhetha kwakho.
Ukufaka icandelo lezaziso Ukusuka kwisicelo esiphathwayo sikaYouTube kufuneka ulandele la manyathelo alula:
Vula isicelo se-Youtube kwisixhobo sakho esiphathwayo
cofa kwifoto yeprofayile (kwikona ephezulu ngasekunene)
Cofa kwindawo okhetha kuyo "ukuseta"
Ndinokuguqula ntoni kwicandelo lezaziso
Nje ukuba singene kwicandelo lezaziso Sinokusebenzisa kwaye sisebenze iibhokisi ezininzi, zizonke zili-12.
Ibhokisi yokuqala esiza kuyifumana kwicandelo lezaziso yile "Isishwankathelo esicwangcisiweyo”. Ukuba uthatha isigqibo sokuyisebenzisa, uya kufumana isishwankathelo semihla ngemihla ngazo zonke izaziso ozifumeneyo kutshanje Ungalikhetha ixesha oza kulifumana ngalo eli sishwankathelo.
Enye yeebhokisi ezibalulekileyo Kwicandelo lezaziso ngokuchanekileyo oku. Ukuba umsebenzisi uthatha isigqibo sokuvula "imirhumo" uya kugunyazisa iapp ukuba imthumele izaziso zawo onke loo majelo abhalisele kuwo.
Ngalo lonke ixesha ungena kwisicelo seYouTube Unokufumana uthotho lweevidiyo ezicetyiswayo ukujonga ngeso lengqondo. Yiyo kanye le nto yenzelwe lo msebenzi. Ukuba uyayivula, uya kuba nakho ukufumana iingcebiso ezivela kuYouTube malunga nezo vidiyo ezinokuthi zisithande.
Umsebenzi kumagqabaza am
Ngokusebenzisa le bhokisi kwicandelo "lezaziso" siya kuba nakho fumana isaziso ngalo lonke ixesha umsebenzisi esenza izimvo kwividiyo ethunyelwe kwisitishi sethu okanye nawuphi na omnye umsebenzi onxulumene nesiteshi sethu se-YouTube.
Sicebisa ukuba ujonge le bhokisi. Ngale ndlela unokufumana izaziso xa bebeka izimvo kwenye yeevidiyo zakho okanye ngokufana nomxholo othile owukhuphele ngaphambili kwisitishi sakho.
Kulula kwaye ngokukhawuleza unako qwalasela nganye yezaziso zakho Kwisicelo seYouTube. Khumbula ukuba ukwenziwa kwezaziso kuya kusinceda sigcine umkhondo weakhawunti yethu.
1 Amanyathelo okufikelela kwicandelo lezaziso
2 Ndinokuguqula ntoni kwicandelo lezaziso
2.1 Isishwankathelo esicwangcisiweyo
2.3 Umsebenzi kumagqabaza am
Ndazi njani ukuba bangaphi ababhalisile endinabo kwiYouTube?
Ungayisebenzisa njani imeko ye-Twitter?